Magnesium Silicide, Mg2Si - Goodao Technology Co, Ltd.
Mg2Si ndiyo chete yakagadzikana komputa yeMg Si binary system. Iine hunhu hwenzvimbo yepamusoro yakanyunguduka, kuomarara kwakanyanya uye yakakwirira elastic modulus. Iri rakamanikana bhendi gap n-mhando semiconductor zvinhu. Iyo ine yakakosha tarisiro yekushandisa mune zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, laser, semiconductor kugadzira, kugara uchidzora tembiricha yekutaurirana uye mimwe minda.
Chinese zita re magnesium silicide
Chirungu Zita: magnesium silicon
Iyo inozivikanwawo simbi yesimbi
Makemikari fomura mg-Si
Iko kurema kwemolekyuli ndeye 76.71 CAS
Kuwedzera nhamba 22831-39-6
Nzvimbo yakanyunguduka 1102 ℃
Insoluble mumvura uye denser pane mvura
Kuwandisa: 1.94g / cm
Kushanda: Mg2Si ndiyo chete yakagadzikana komputa yeMg Si binary system. Iine hunhu hwenzvimbo yepamusoro yakanyunguduka, kuomarara kwakanyanya uye yakakwirira elastic modulus. Iri rakamanikana bhendi gap n-mhando semiconductor zvinhu. Iyo ine yakakosha tarisiro yekushandisa mune zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, laser, semiconductor kugadzira, kugara uchidzora tembiricha yekutaurirana uye mimwe minda.
Magnesium silicide (Mg2Si) ndeye isina kunangana semiconductor ine rakamanikana bhendi gwanza. Parizvino, iyo microelectronics indasitiri inowanzo kuve yakavakirwa pane Si zvigadzirwa. Iyo nzira yekukura Mg2Si yakatetepa firimu pa Si substrate inoenderana ne Si maitiro. Naizvozvo, Mg2Si / Si Heterojunction chimiro chine hukuru hwekutsvaga. Mune ino bepa, nharaunda-inoshamwaridzika Mg2Si matete mafirimu akagadzirirwa pa Si substrate uye insulating substrate ne magnetron kuputira. Mhedzisiro yekuputika mg firimu ukobvu pahunhu hweMg2Si dzakaonda mafirimu yakadzidzwa. Pamusoro peiyi hwaro, tekinoroji yekugadzirira yeMg2Si based heterojunction LED zvishandiso zvakadzidzwa, uye emagetsi uye oparesheni zvivakwa zveMg2Si mafirimu matete akadzidzwa. Chekutanga, Mg mafirimu akaiswa paSi substrates nemagnetron ichiputira mukamuri yekushisa, Si mafirimu neMM mafirimu akaiswa pakudzivirira magirazi egirazi, uyezve mafirimu eMg2Si akagadzirirwa nekupisa kwekupisa mune yakadzika vacuum (10-1pa-10-2pa). Mhedzisiro yeXRD uye SEM inoratidza kuti iyo imwechete chikamu Mg2Si yakatetepa firimu yakagadzirirwa nekukwirisa pa400 ℃ ye4h, uye yakagadzirirwa M2Si yakatetepa firimu ine gobvu, yunifomu uye inoenderera zviyo, yakatsetseka pamusoro uye yakanaka crystallinity. Kechipiri, mhedzisiro yeukobvu hweMM firimu pane kukura kweMg2Si semiconductor firimu uye hukama pakati pehuremu hweMig firimu uye ukobvu hweMg2Si firimu mushure mekukwiridzwa yakadzidzwa. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kana hukobvu hweMig firimu iri 2.52 μ m uye 2.72 μ m, inoratidza kuchena kwakanaka uye kugadzikana. Ukobvu hweMig2Si firimu inowedzera pamwe nekuwedzera kweMg ukobvu, iri ingangoita 0.9-1.1 nguva yeiyo yaMg. Ichi chidzidzo chinoita basa rakakosha mukutungamira dhizaini yezvigadzirwa zvichibva paMig2Si dzakaonda mafirimu. Chekupedzisira, iko kugadzirwa kweMg2Si kwakavakirwa heterojunction mwenje kuburitsa michina inofundwa. Mg2Si / Si uye Si / Mg2Si / Si Heterojunction LED zvigadzirwa zvakagadzirwa paSi substrate.
Izvo zvemagetsi uye zvemagetsi zvivakwa zveMg2Si / Si uye Si / Mg2Si / Si heterostructures inoongororwa nenzira ina probetest system, semiconductor hunhu analyzer uye yakatsiga / inononoka fluorescence spectrometer. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti: iyo resistivity uye jira kuramba kweMg2Si matete mafirimu anoderera nekuwedzera kweMg2Si ukobvu; Mg2Si / Si uye Si / Mg2Si / Si heterostructures inoratidza yakanaka unidirectional conduction hunhu, uye iri pamhepo yeSi / Mg2Si / Si yakapetwa kaviri heterostructure chimiro inenge 3 V; iyo photoluminescence kusimba kweMg2Si / n-Si heterojunction chishandiso chiri chepamusoro apo iyo wavelength iri 1346 nm. Kana wavelength iri 1346 nm, iyo photoluminescence kusimba kweMg2Si matete mafirimu akagadzirirwa pane insulating substrates ndiyo yepamusoro; zvichienzaniswa neiyo photoluminescence yeMg2Si yakatetepa mafirimu akagadzirirwa pane dzakasiyana substrates, iyo Mg2Si mafirimu akagadzirirwa pane yakakwira-yakachena quartz substrate ine nani luminescence kuita uye infrared monochromatic luminescence hunhu.
Pashure: vanadium silicide, VSi2
Zvadaro: Chromium Silicide, CrSi2
Magnesium silicide chiwanikwa
Magnesium yesilide yakasviba
yakachena Magnesium silicide
yakachena Magnesium silicide Mafekitori
yakachena Magnesium silicide Fekitori
yakachena Magnesium silicide Mugadziri
yakachena Magnesium silicide Vagadziri
yakachena Magnesium silicide Mutengo
yakachena Magnesium silicide Quotes